आँचलसँग सुशान्तको रोमान्स ! (भिडियो सहित) « epurwa
आँचलसँग सुशान्तको रोमान्स ! (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : ४ असार २०७५, सोमबार ०८:०७
झापा, असार ४ । नायिका आँचल शर्मालाई सँधै एउटा आरोप लागिरहेको हुन्थ्यो कि उनले पल शाह बाहेक अरु कलाकारसँग म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गर्दिनन् । तर त्यो आरोप आजकल मत्थर हुँदै गईरहेको छ । आँचलले अहिले पल शाहसँग मात्र होइन अन्य कलाकारहरुसँग पनि अभिनय गरिरहेकी छन् ।
गीतमा शंकर थापा “स्माईल”को संगीत तथा प्रह्लाद शाहका शब्द छन् । पछिल्लो समयमा थुप्रै चर्चित गीतहरु बजारमा ल्याईरहेको डश म्यूजिकले व्यबस्थापन गरेको गीतका प्रस्तोता गीतकार प्रह्लाद शाह हुन् । गीतका संगीत संयोजक उदयराज पौडेल हुन् । भिडियोमा छायांकन अनिल के। मानन्धरको रहेको छ भने सम्पादन सुप्रिम पराजुली हुन् ।